BBC Somali - Warar - Maxaad ka ogtahay Burundi?
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 25 June, 2012, 12:55 GMT 15:55 SGA
Ciidan ayaa Burundi ka joogo Somalia
Farxada xuska sannad guurada 50-naad waxa laga dheehan karaa wajiyada dadka kunool caasimaddaBujumbura, waa magaalo ay ku hareeraysnyihiin buuro waaway. Safar ayaan u galnay Magaalo la yiraahdo Bugarama oo qiyaastii 35 km dhinaca waqooyi ka xigta caasimadda.
Xilliggii ay socdeen dagaaladu, magaaladan waxay ahayd jiida hore ee dagaalka.Waxay ahayd albaadka laga soo galo caasimada, ciddii ay gacanta u gasho ayaana maamuli jirtay caasimada. Waddada gasha magaaladan waa mid laab laabatiin badn leh waxaana lagu dhul sameeyey buuro waaweyn oo xitaa marka aad baabuurka kaxeneyso haddii aadan taxadar muujin waxa halis ah in aad gebi ka dhacdo..
Afrika Dagaalka Koonfurta Suudaan oo sii fiday